UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTHENGA KWI-Ireland | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA iIreland, Ukufudukela kwezoqoqosho ngokutyala imali yokuhlala eIreland ngotyalo mali eIreland, ukuhlala ngokutyala iIreland, ukuhlala ngokuhlala ngeenkqubo zotyalo mali Ir
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eIreland nakwiVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eIreland:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland
● Ubummi ngotyalomali oluvela eIreland
● IVisa yegolide eIreland
● Ipasipoti yesibini evela eIreland
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eIreland Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eIreland kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali waseIreland basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eIreland zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eIreland, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eIreland, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eIreland, ukuhlala kwakhona kwesibini ngokutyala imali eIreland, ukuhlala kwakhona kubabini ngotyalo mali eIreland, ukuba ngummi kunye nokuhlala ngokutyala imali eIreland. , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo mali eIreland, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo mali eIreland, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo mali eIreland, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo mali eIreland, Ubummi ngotyalo mali eIreland, Ubummi ngeenkqubo zotyalo mali eIreland, Ubumi ngenkqubo yotyalo mali eIreland, okwesibini Ubummi ngotyalo mali eIreland, ubumi bobabini ngotyalo mali eIreland, indawo yokuhlala nobumi ngokutyala eIreland, ukuhlala nokuba ngummi ngokutyala imali eIreland, iinkqubo zokuba ngummi kwezoqoqosho eIreland, Ubummi ngesikimu sotyalo mali eIreland, Ubummi ngezikimu zotyalo mali eIreland, okwesibini ipaspoti eIreland, ipasipoti yesibini Iinkqubo ze-ort eIreland, inkqubo yesibini yokundwendwela eIreland, ipaspoti yesibini eIreland, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eIreland, ipaspoti yesibini yozakuzo eIreland, ipasipoti yesibini yotyalo mali eIreland, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eIreland, iskim sepasipoti yesibini eIreland, okwesibini Izikimu zokundwendwela eIreland, igosa lokundwendwela eIreland, iiVisa zegolide eIreland, iinkqubo zeVisa egolide eIreland, inkqubo yegolide yegolide eIreland, eyesibini visa yegolide eIreland, inkqubo yesibini yegosa yegolide eIreland, ubumi beVisa egolide eIreland, ubumi kunye nevisa yegolide e-Ireland, ukuhlala kunye ne-visa yegolide e-Ireland, ubumi be-visa obugolide e-Ireland, inkqubo ye-visa yegolide e-Ireland, izikimu ze-visa zegolide e-Ireland.
"Izisombululo ezi-1 zokuyeka" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali eIreland ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci e-Ireland lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 200,000
Intshayelelo iIreland kunye nokuhlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda nzulu ngeIreland
I-Ireland lelinye lawona mazwe aseYurophu asondeleyo e-US nase Canada. Ikwayindawo yokuthumela eyoyikisayo yokuphanda intsalela ye-Yurobhu-i-UK ayisiyiyo kwaphela iyure, iBarcelona yindiza nje yeeyure ezimbini kwaye iRoma ziiyure nje ezintathu. Kwabahambi ngehlabathi, akukho likomkhulu liphezulu kuyo nayiphi na indawo ngaphandle kweIreland. I-Ireland inemithetho ebukhali yezixhobo - akukho semthethweni ukuba nompu ngaphandle kokuba uhlala ekhayeni, ukanti ekupheleni kosuku umpu owuthengayo kufuneka ube “yifama efanelekileyo.” Oku kuthetha ukuba iindlela zohlaselo lwemipu phantse azikho kwaye iindlela zokuziphatha gwenxa xa zithetha ziphantsi eIreland. Ngokuqhelekileyo ithetha indawo ekhuselweyo yokwenyani ukubiza ikhaya, ngokuchaseneyo namanye amazwe amaninzi. Bonke abantu abahlala eIreland bafanelekile ukuba bafumane iinkonzo zonyango.
Kwimeko apho inzuzo yakho iphantsi komda othile, ungade ulingane netyala elikwikhadi leklinikhi elikulungeleyo ukufumana lonke ulawulo lweklinikhi yento. Ukuba awuyifanelanga imali oyilwayo kwikhadi leklinikhi, kuyakufuneka uhlawule imali-esekwe kulawulo oluthile njengotyelelo lweengcali, ukanti baxhaswa ligunya likarhulumente, eligcina iindleko ziphantsi ngokuphakathi. I-Ireland ide ibonelele ngeNkqubo yokuHlawula iziyobisi, egubungela isixa ekufuneka usichithe kugqirha onyangiweyo, iSikimu sokuGula seXesha eliLide, esiya kuthi sijongane nenkcitho yakho kwimeko yokuba unemeko eqhubekayo okanye ende, kunye Inkqubo yokuKhathalela nokuKhulelwa kwabaNtwana, exhasa kakhulu iindleko zeklinikhi zokuba nabantwana.
Abahlali baseIreland banokuba ngabahlali abaphindiweyo belinye ilizwe, okoko nje eli lizwe longeze amandla okuba ngabemi kabini. Oko kuthetha ukuba ukujika ube ngumhlali waseIreland akuthethi ukuba kufuneka unikezele ngamalungelo akho kwilizwe lakho lasekhaya. E-Ireland, kwanabo bangengabo abahlali banokuvula ibhalansi yezemali. Konke okuya kufuna ukuvula irekhodi luhlobo olusemthethweni lwe-ID yakho (njenge-visa yakho) kunye nokuqinisekiswa kwendawo okuyo, nokuba indawo yakho ikwelinye ilizwe. Iibhanki ezimbalwa zinzima ngandlel 'ithile kunye nabangahlaliyo kwaye zifuna iintlobo ezimbini zokuqinisekisa idilesi okanye imbali yemali evela kwilizwe lakho lokuzalwa. Ngelishwa, ibhalansi yezemali eIreland kunqabile ukuba ivulwe kwiwebhu, ke kuyakufuneka ume ume de ube ulolo hlanga ukujongana nalo msebenzi.
Ixabiso eliqhelekileyo lezinto ezisisiseko eIreland alithobekanga, ukanti ngokufanayo alikho ngaphezulu kwezinye izizwe zaseYurophu, umzekelo, i-UK okanye iSweden. Abathengisi abafudukela kwisizwe akufuneki ukuba bacinge ukubekela bucala itoni yemali, kwaye akufuneki balindele indlela yokuphila yobunewunewu ngenkcitho encinci. Nangona kunjalo, banokuba nethemba lokuphila ngokufanelekileyo ngaphandle kokutshisa zonke izixhobo ezikhoyo inyanga nenyanga. Phinda usebenzise inkosi ngakumbi. Iindleko zokuphila eIreland ziya kuxhomekeka kancinci apho uhlala khona. Ngokufanayo, njengalo naliphi na ilizwe, ukuhlala kwenye yeedolophu zaseIreland, umzekelo, iDublin, iLimerick, okanye iGalway iya kubiza kakhulu. Oku kungenxa yeendleko zokulala oza kuzifumana ngaphakathi kweedolophu. Ukuthengisa kunokunciphisa iindleko ngokupheleleyo ngokuhlala kwimida yedolophu. Ewe uhlala kude kude nendawo yokumisa izithuthi zikawonke-wonke uya kuhamba ngendlela ehloniphekileyo ekunciphiseni iindleko kwi-Emerald Isle
Njengoko kubonisiwe, ngenxa yokuba i-Ireland sisizwe esisisiqithi, iimveliso, umzekelo, izinto ezisisiseko, utywala, kunye negesi kufuneka zingeniswe kwaye ngenxa yoko zibiza kakhulu kunaleyo unokuzibandakanya nayo kumhlaba wommandla. Ngelixa yonke iIreland inika ukoneliseka okungathethekiyo, kukho iindawo ezimbalwa ezisezidolophini ezona ziqhelekileyo ikakhulu phakathi kweepats. Ezinye zazo ziyaziwa ngokukhanya kweyona ndawo yokuba ziindawo ezisezidolophini, zisenza ukuba kube lula ukuhambahamba, hamba lonke ilizwe, kwaye unike inethiwekhi enkulu yomhlaba wonke kubantu bangaphandle ukuba balungelelanise. Olu luntu lwasezidolophini ngokufanayo luxhaphakile kumandla abo entlalontle kunye nentetho, benika umntu owayekhe wenza uphando olwahlukileyo nolucacileyo lweendawo ezahlukeneyo zenkcubeko yaseIreland. Isikolo sikarhulumente eIreland simahla kwaye sikumgangatho ophezulu. Abagcini baya kufuna ukuhlawula iimpahla, amashwamshwam, kunye nezinto zesikolo. Ezi ndleko ziya kutshintsha kwaye zixhomekeke esikolweni nakwinto ofuna ukuyisebenzisa.
Imiyalelo kwisikolo sabucala okanye kwihlabathi liphela iya kuzisa iindleko zemfundo kubo bonke abantu baseIreland kwaye kwangoko babonakalise ukupapasha kwangaphambili. Iindleko zemfundo minyaka le ziya kuxhomekeka esikolweni nakwiminyaka yomntwana wakho, kodwa abagcini abaqhelekileyo banethemba lokuchitha malunga ne-10,000 EUR (11,000 USD) ngomntwana ngamnye. Xa usiya kolunye uhlanga, kubalulekile ukuqonda imigangatho yezentlalo kunye nokuziphatha kulindeleke kwikhaya lakho elitsha. Ukungazazi izithintelo zentlalo kunokubangela imeko ethotyiweyo kuwe okanye, kwimbono yokungabi nathemba, kukhokelela kwisiphumo esothusayo, umzekelo, ixesha lokuvalelwa entolongweni okanye ukunqandwa ekuhlaleni.
Ngethamsanqa, kwisizwe, umzekelo, i-Ireland, ukungenisa iziphoso zentlalontle akunakuyinyanzela into eyinyani njengentolongo okanye ukuhanjiswa. Zonke izinto eziqwalaselweyo, kufanelekile ukuba wazi malunga neminqweno yesizwe kwezentlalo nakwezentlalo ngenjongo yokuba ukwazi ukuhlengahlengisa ngokufanelekileyo kwaye ungene kwikhaya lakho elitsha laseIreland.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali lwaseIreland
Ubuncinci botyalomali Indawo yokuhlala ngokutyala imali eIreland
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye Ayalend
Indawo yokuhlala ngokutyala imali eIreland
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eIreland
Emva kweminyaka esi-5 nenqanaba le-PR
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseIreland
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala imali eIreland
Ummi wabatyali mali I-1million ityalwe kwi-bond kwi-0% yenqanaba lenzala
Utyalomali lweshishini € 500,000 etyale imali kwiShishini laseIreland iminyaka emi-3
Utyalomali € 500,000 etyalomali kwingxowa mali evunyiweyo. Ngolwazi oluthe kratya nceda ubone amakhonkco ngezantsi.
Iitrasti zeNtengiso yeNdawo Utyalomali oluncinci lwe- $ 2 yezigidi kuyo nayiphi na i-Irish REIT edweliswe kwi-Irish Stock Exchange. Utyalo-mali lwe-2 yezigidi lotyalo-mali lunokusasazeka kwinani leERITs ezahlukeneyo zaseIreland.
Utyalomali oluxubekileyo Utyalomali kwipropathi yokuhlala yexabiso elincinci le- € 450,000 kunye notyalo-mali oluthe ngqo lwe- € 500,000 kwisibophelelo sabatyali bamanye amazwe, unika ubuncinci kutyalo-mali lwe- € 950,000. Inqanaba lotyalo-mali kwi-bond alisayi kuphinda linxulunyaniswe nexabiso lepropathi ethengiweyo.
Isipho € 500,000 umnikelo wobubele ngumntu (€ 400,000 apho abantu aba-5 okanye nangaphezulu badibanisa izibonelelo zabo zeprojekthi enye efanelekileyo).
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala eIreland
I-Ireland lilungu le-EU. Inomgangatho ophakamileyo wokuphila kunye nendawo eneshishini enobuhlobo eyenza eli lizwe libe nomtsalane kakhulu kubatyali mali abafuna ukufuduka. Inkqubo yobunzima yegolide yokuhlala ibonelela abafaki-zicelo kunye neentsapho zabo ngemvume yokuhlala enokuhlaziywa ngokungenammiselo, ngelixa abatyali-mali benganyanzelwanga ukuba bahlale eIreland. Abahlali bafumana ukungathintelwa, i-visa yokuhamba simahla kwiNdawo yokuHamba ngokuQhelekileyo, kubandakanya iUnited Kingdom.
Ukufudukela kosapho eIreland
Amalungu osapho osondeleyo anokufumana ubume bendawo yokuhlala xa isicelo sakho sabiwa, ngaphandle kokunyusa imali yotyalo-mali. Oku kubandakanya iqabane / iqabane lakho, abantwana abangaphantsi kwe-18, kunye nabantwana abaphakathi kwe-18 ukuya kuma-24 ukuba abatshatanga kwaye baxhomekeke kuwe (abafundi abasisigxina).
Indawo yokuhlala ngenkqubo yotyalo mali eIreland insite
Abemi be-non-EEA kunye neentsapho zabo ezivumayo kutyalo-mali oluvunyiweyo eIreland zivulelekile kwiNkqubo yoTyalomali lwaBaphambukeli. Abafaki-zicelo abavunyiweyo baya kunikwa amalungelo okuhlala e-Ireland, aza kubavumela ukuba bangene kuRhulumente kwii-visa zokungena kwiindawo ezahlukeneyo. Ipemethe ikhutshwa okokuqala isithuba seminyaka emi-2 kwaye inokuphinda ihlaziywe eminye iminyaka emi-3. Imvume yokuhlala ingaphinda ihlaziywe kwakhona kwisithuba seminyaka emihlanu yokuqala ngaphandle kokugcina utyalo-mali.
Utyalomali kufuneka ilunge eIreland, ilungele imisebenzi kwaye inomdla kuluntu, iimali ezityaliweyo kufuneka zifunyenwe ngokusemthethweni kwaye zibe zezomtyali mali.
Izicelo kufuneka zibe nobungqina bexabiso elipheleleyo, ubungqina bemali egubungela utyalo-mali, ubungqina bemvelaphi yemali, ubungqina bokuba imali ingadluliselwa kunye nerekhodi elicocekileyo lolwaphulo-mthetho.
Xa isicelo sakho samkelwe, akukho mfuneko yokuba ubonelele ngendawo yokuhlala eIreland, kodwa kuya kufuneka wenze utyelelo olunye ngonyaka ngamnye.
Imfuno zezemali zeIreland
Okwangoku, kukho iindlela ezi-3 zokufumana indawo yokuhlala e-Ireland ngokusekwe kutyalo-mali. Eyokuqala ngumnikelo wobubele ongabuyiswayo obubuncinci be-USD 500,000.
Okwesibini, unokukhetha ukutyala imali kwinkampani yaseIreland. Utyalomali kufuneka lugcinwe iminyaka emi-3.
Okwesithathu, unokutyala imali kwiTrasti yoTyalo-mali yokuThengisa izindlu, ngesixa esincinci se-USD 2 yezigidi.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eIreland
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseIreland kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eIreland ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eIreland ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo mali oluvela eIreland, ukuhlala ngokutyala imali evela eIreland kunye namanye amathuba otyalo mali kwamanye amazwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali evela eIreland okanye kwiVisa yaseGolide evela eIreland okanye ubumi ngokutyala imali evela eIreland okanye kwipaspoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eIreland, sikunika isisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani I-Ireland okanye i-offshore, izibonelelo zabantu base-Ireland kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi e-Ireland nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseIreland:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeIreland, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eIreland, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eIreland, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo mali baseIreland, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo mali eIreland kunye nefemi yokubonelela ngokufudukela eIreland.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eIreland ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eIreland ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eIreland ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eIreland ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eIreland ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo mali ezivela eIreland.
Iinkqubo zeVisa zegolide eIreland ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eIreland ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eIreland ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eIreland ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali lwearhente yokuthengiswa kwezindlu eIreland ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo mali eIreland, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalomali olwenziwe ngabo lokuba ngabahlali ngokutyala eIreland. Sidibene nabaphuhlisi bezindlu ezimbalwa eIreland abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eIreland, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwezindlu eIreland notyalo mali kwizindlu nomhlaba eIreland.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona kweIreland ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona ngeGqwetha loTyalo-mali eIreland kuya kubonelela ngoncedo olunamaxwebhu ngoncedo lokuhlala kwakho ngempumelelo ngootyalo mali eIreland. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala imali e-Ireland kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka e-Ireland okanye e-Ireland, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokuLungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland kubaxumi ngokufumana imvume yokuhlala yaseIreland kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo eIreland, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili ngokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali eIreland kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali seIreland. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBuhlali ngokuTyala imali eIreland kunye neeVisa zegolide ziya kunceda ngokugcwalisa iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho e-Ireland alungile, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni base-Ireland.
Nje ukuba isicelo sakho sobumi ngokutyala imali eIreland samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eIreland kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini aseIreland:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eIreland azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka eIreland.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo mali eIreland azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eIreland okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eIreland.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eIreland azinikezelwa ngayo nayiphi na into engekho mthethweni okanye ulwaphulo mthetho eIreland.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eIreland ayenzelwanga abantu abajongana nezinto zeMfuzo e-Ireland.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eIreland ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eIreland.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeIreland ayifumaneki kubantu baseIreland abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eIreland, okanye ukuthuthwa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eIreland ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eIreland ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eIreland.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Ayalend ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eIreland.
Indawo yethu yokuhlala abameli eIreland abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eIreland.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseIreland kunye neKYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva kuko nakuphi na ukwaliwa kwabasemagunyeni eIreland ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eIreland.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo mali eIreland kutyalo mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nocwangciso lwezindlu eIreland.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseIreland, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eIreland zibonelela ngamaxabiso aphantsi, ngezinga lempumelelo laseIreland.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eIreland sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo eIreland.
Indawo yokuhlala enamava ngabaceli botyalo mali baseIreland kunye nabameli bezomthetho baseIreland ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iIreland kunye nesicelo abazimiseleyo ngempumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eIreland nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eIreland
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iIreland, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala imali eIreland kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwenzayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala ngokuTyala imali eIreland
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseIreland, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuHlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eIreland nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eIreland
Inkqubo yeMvume yokuSebenza eIreland
Ukuhlala okwethutyana eIreland
Indawo yokuhlala eIreland
Izindlu zoonozakuzaku kunye nabameli baseIreland
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eIreland nakwezinye iiNkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizinikezela eIreland malunga neemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela eIreland nosapho lwakho ngokutyala, thina njengeqabane lakho eIreland, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eIreland ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo mali eIreland, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiIreland, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseIreland abasenza ivenkile yokumisa i-Ireland kunye namazwe ayi-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini eIreland ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuHlala ngokutyala imali eIreland ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eIreland nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eIreland okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eIreland zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eIreland
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eIreland uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eIreland kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eIreland, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eIreland
Ngaba ufuna ukubonisana eIreland, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eIreland Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eIreland okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali I-Ireland ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eIreland ukuqala kwangoko eIreland.
Iinkonzo zabasebenzi eIreland
yethu Inkampani yabasebenzi eIreland inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba ezikhoyo eIreland free.
Iinombolo zeFowuni eyiNene zeIreland
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eIreland kunye amanani abonakalayo eIreland Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eIreland
Accounting, ngenxa yenkuthalo eIreland kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eIreland
Ukuseta ishishini eIreland
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland, ukuseta ishishini kwi Ayalend.
Sinikezela ngezisombululo ezisezantsi ze-IT eIreland
Uyilo lwewebhu eIreland
Uphuhliso lwezoQoqosho kwiIreland
Uphuhliso lwewebhu eIreland
Uphuhliso lweBlockchain eIreland
Uphuhliso losetyenziso eIreland
Uphuhliso lweSoftware eIreland
Amagqwetha okuHlala kwakhona ngoTyalo mali eIreland
Sibonelela ngokuHlala ngokusemthethweni ngezisombululo zotyalo mali eIreland kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iIreland, siziinkokeli, inkampani yethu yezomthetho eIreland ineearhente zokufudukela eIreland, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini okwenza iinkonzo eIreland kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseIreland kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eIreland libonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala e-Ireland, xa imvume yakho yokuhlala e-Ireland ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseIreland ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo mali eIreland. Ukuba use-Ireland okanye uceba ukutyelela i-Ireland, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eIreland kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuze asetyenziswe kummandla wase-Ireland. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhutshiwe okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseIreland.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo - Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eIreland
Ithini inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eIreland?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eIreland ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseIreland ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eIreland, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eIreland. ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eIreland, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eIreland, indawo yokuhlala elungileyo ngamagqwetha otyalo mali eIreland kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali baseIreland, abasebenza kwindawo yokuhlala eyiyo ngabameli botyalo mali eIreland, kunye neefem eIreland.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eIreland | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali eIreland | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eIreland | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eIreland | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali baseIreland
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo mali eIreland?
Ubummi ngotyalo-mali e-Ireland, bunokuchazwa njengokufumana ubumi base-Ireland ngotyalo-mali kuqoqosho lwase-Ireland ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl eIreland. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali e-Ireland, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali e-Ireland exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali e-Ireland, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali e-Ireland, abemi abangcono ngamagqwetha otyalo-mali e-Ireland kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali baseIreland, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eIreland, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eIreland.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eIreland | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eIreland | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eIreland | Abatyali mali abafikelelekayo eIreland | Abatyali mali abangenakufikeleleka eIreland | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo eIreland
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eIreland?
Ipasipoti yesibini eIreland, inokuchazwa njengokufumana ubumi baseIreland ngokutyala imali kuqoqosho lwaseIreland ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eya eIreland, inkqubo yesibini yepasipoti yeIreland exhaswa yi Iinkonzo zokundwendwela zesibini eIreland, ngamagqwetha esibini eepasipoti eIreland, amagqwetha esibini eepasipoti eIreland kunye nabacebisi beepaspoti besibini eIreland, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela yesibini eIreland, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eIreland.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini eIreland | Iiarhente zokundwendwela zesibini eIreland | Amagqwetha esibini epasipoti eIreland | Igqwetha lesibini lokundwendwela eIreland | Abacebisi bokundwendwela besibini eIreland
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eIreland?
IVisa yegolide eIreland, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eIreland ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseIreland ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Iinkonzo zevisa zegolide eIreland, ngamagqwetha ethu egolide eIreland, amagqwetha egosa eVisa asezantsi eIreland kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo begolide eIreland, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eIreland, nakwiifem zokubonisana nabantu zokufudukela eIreland.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeIreland | Iiarhente zevisa zegolide eIreland | Amagqwetha egosa egolide eIreland | Amagqwetha egosa egolide eIreland | Abacebisi nge visa begolide eIreland
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eIreland?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eIreland yi-EUR 200,000.
Ngaba uyayinika inkxaso yezomthetho iIreland yokuHlala kwakhona ngokutyala imali?
Ewe, igqwetha lethu eIreland kunye neearhente eIreland zibonelela ngenkxaso kubuhlali ngokutyala eIreland.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eIreland kuyabiza?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala imali eIreland kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali yotyalo mali zaseIreland zezabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngokuTyala eIreland, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala eIreland okanye kwi-visa yotyalomali eIreland?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi na ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eIreland ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eIreland ukusuka eAfrika, ukuhlala kwakhona ngotyalomali ukuya eIreland ukusuka eYurophu, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eIreland ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eIreland usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eIreland usuka eBangladesh, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eIreland usuka eIndonesia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eIreland usuka eSri Lanka, Uhlala kwakhona ngokutyala imali usiya eIreland usuka eNepal, Uhlala kwakhona ngokutyala imali usiya eIreland usuka eIndiya nakwiResidency. ngotyalomali eIreland ukusuka eUAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eIreland
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala imali eIreland
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eIreland
IZiko lamaShishini aseMelika -I tracker yaseIran
IWashington Post-kuMbindi Mpuma
Umbutho wokuthintela izixhobo zeKhemikhali
Imvelaphi yesigqibo se-UN 2231 (2015)
Amaxesha ePars -Izixhobo zeNyukliya zaseIran
Isebe likaRhulumente-Isohlwayo sokungazibandakanyi
Iziko laseMelika loXolo- iIran Primer
Iziko leMonterey-iZiko leziFundo zokuNgahambelani nokuSebenza
IBhunga lezoBudlelwane baNgaphandle-Ukwanda
Umanyene nxamnye neNyukliya Iran
I-Arhente yoBuntlola e-Central-iNcwadi yeHlabathi yeNyaniso, e-Iran
Umgaqo-nkqubo wezangaphandle -Iran
IZiko laseBelfer lezeNzululwazi neMicimbi yaMazwe ngaMazwe -Izinto zaseIran
I-Arhente yaMazwe ye-Atomic Energy (IAEA)
Inyathelo lokuTya iNyukliya
IZiko leMfundo loMgaqo-nkqubo ongahambisi bucala
Umbutho woLawulo lweArms -Izibonelelo zeLizwe laseIran
IZiko leZizwe ngezizwe laseWoodrow Wilson labaFundi-kwiNkqubo yeMbindi Mpuma
Isiseko sokhuselo lwedemokhrasi
Iziko lezeNzululwazi kunye noKhuseleko lweHlabathi
Umbutho wamanye amazwe kunye noQhagamshelo lweRegime
Iziko laseWashington loMgaqo-nkqubo we-Near East-Iran
IZiko le-IDC Herzliya GLORIA -Iran
Ukhuseleko lwehlabathi -Iran
IArhente yeNdaba yeRiphabhlikhi yeRiphabhlikhi (IRNA)
Iprojekthi yeAlfa, iKing's College yaseLondon-Alpha kwiIran
ISIS yeNyukliya Iran
Inomathotholo yasimahla eYurophu / kwiRadiyo yeNkululeko - eIran
Iziko loLawulo lweeArms kunye nokungahambisi phambili -Iran
Umsebenzi osisigxina weRiphabhlikhi yase-Iran ye-Iran kwiZizwe eziManyeneyo
Iziko lezeCwangciso lobuchule kunye neLizwe jikelele
Isebe likaNondyebo -IOfisi yoLawulo lweeMpahla zaNgaphandle, iZithintelo eIran
Ukophulwa komthetho kunye nezohlwayo
IKomishini yokuLungiselela uMbutho oManyeneyo woVavanyo lweNyukliya
Qhagamshelana neMibutho yoMgaqo-nkqubo kunye noPapasho
Qhagamshela kwiiblogi zoMdla
IKomiti ejongene neMicimbi yoLuntu yaseMelika (AIPAC)
INew York Times -Iran
Ukunikezelwa kweCarnegie yoXolo lwaMazwe ngaMazwe-Inkqubo yoMgaqo-nkqubo weNyukliya
I-Atlantic Council-Ixesha elizayo le-Iran
Umsebenzi osisigxina weRiphabhlikhi yase-Iran ye-Iran kwiZizwe eziManyeneyo nakwezinye iiOfisi zamanye amazwe eVienna
Uxwebhu lwenyani lwe-OPCW: Yintoni isixhobo seKhemikhali?
Ukulawulwa kweTeksi yoLawulo lweTeknoloji
IiNukes zebhlog yengozi
I-Federation of American Scientists (FAS) -INkqubo yeNyukliya yaseIran
Umbutho wamandla eatomiki eIran (AEOI)
IRegistry yeShishini laseIran
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eIreland , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eIreland